Teny notsongaina 15 ho an'ny fahatsapanao fa very eo amin'ny fiainana ianao - Quotes
Ny tsirairay dia mahatsapa ho very very amin'ny fotoana iray mandritra ny fiainany ary amin'ireo fotoana ireo no tena manomboka mametra-panontaniana momba ny tenantsika sy ny votoatin'ny fisiana isika. Betsaka izay efa lasa talohantsika no voatery nitolona tamin'ireto fihetseham-po ireto ihany ary, soa ihany ho antsika, nampita ny fahendreny izy ireo.
Ny fahatsapana fa very dia zavatra ara-dalàna tonga lafatra ary famantarana fa mivoatra amin'ny maha olona am-panahy sy saina anao ianao. Raha mandalo fotoana toy izany ianao amin'ny fiainanao dieny izao dia tsy maintsy manampy ireto teny nindramina ireto.
Raha tsy very isika vao manomboka mahatakatra ny tenantsika. - Henry David Thoreau
Ity no lesona voalohany sy manan-danja indrindra amin'ny tsonga rehetra naseho eto. Manamafy izany fa raha tena hahita ny tenantsika sy hahatakatra ny toerana misy antsika isika izao rehetra izao , tsy maintsy mamoy ny tenantsika aloha isika. Aza kivy raha mahatsapa fa very ianao - midika izany fa afaka manomboka mahita ny tenanao ianao izao.
Tsy maintsy vonona ny hamela ny fiainana kasaina hatao isika, mba hananantsika ilay fiainana miandry antsika. - Joseph Campbell
Matetika loatra isika dia mahatsiaro ho ambany ny fiainantsika satria tsy mifanaraka amin'ny nofintsika sy ny faniriantsika izany. Raha ny tena izy dia afaka mikasa, maniry ary manantena izay tianao rehetra ianao, fa ny fiainana tokana azonao atao dia ilay eo alohanao. Ka atosiho amin'ny lafiny iray ny preconceptions anao ary sokafy ny masonao amin'ny fiainana miandry anao.
toa tsy liana amiko ny vady
Ny fanahy izay tsy manana tanjona voafaritra amin'ny fiainana dia very ho aiza na aiza, tsy tokony ho aiza. - Michel de Montaigne
Ity fitanisana ity dia manambara fahamarinana masiaka momba ny fiainana izay tsy hijanonana ho very intsony, dia tokony hahita ny antsontsika. Rehefa afaka maka sary an-tsaina sy mahatsapa ianao ny tanjonao amin'ny fiainana , ny zavatra hafa rehetra dia milatsaka amin'ny toerany.
Tsy maintsy midina amin'ny lalana tsy mety ianao mba hahitanao ny làlana mety. - Bob Parsons
Manaraka tsara ny teny nalaina teo aloha, eto dia ampahatsiahivina isika fa raha te hahalala ny antsontsika dia mila mandinika aloha izay tsy izy. Tokony ho vonona isika hanao zavatra tsy mety mba hahitantsika ny lalana tokana izay mahatsapa fa mety.
Raha tsy manaraka ny tadiavinao ianao dia tsy hanana izany mihitsy. Raha tsy manontany ianao dia tsia foana ny valiny. Raha tsy mandroso ianao dia eo amin'ny toerana mitovy foana. - Nora Roberts
Raha toa ianao ka mila teny nindramina hanosehana anao hanao zavatra, dia izao. Mazava ny hafatra ary marina izany: ny tsy fihetsika dia hitarika anao hamaka hatrany amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Mba handrosoana dia tsy maintsy be herim-po ianao ary mandray io dingana io.
Ny loza mety hitranga amin'ny fanapahan-kevitra tsy mety dia tsara noho ny fampihorohoroana amin'ny fanapahan-kevitra. - Maimonides
Raha manahy ny amin'ny dingana tsy mety ianao dia avelao ity lesona ity ho lesona ho anao. Na dia mampatahotra azy aza ny fanapahan-kevitra diso, dia ratsy lavitra kokoa ny tsy mandray fanapahan-kevitra mihitsy.
Roapolo taona manomboka izao dia ho diso fanantenana kokoa ianao amin'ireo zavatra tsy nataonao noho ireo nataonao. Ario àry ireo tsipika fitifirana. Sambo miala amin'ny seranana azo antoka. Sambory amin'ny rivotra ny varotrao. Mikaroha. Nofy. Discover. - Tsy fantatra
Miorina amin'ny lesona roa farany, ity teny nindramina ity dia mitondra antsika any amin'ny ho avy ary milaza amintsika ny haben'ny mety hanenenantsika amin'ireo zavatra tsy nataontsika. Izy io no antony manosika tonga lafatra ho an'ireo fotoana izay sendra tsy mitandrina isika ary tsy tokony handray risika.
Fihetseham-po 20 tsy mampahazo aina izay manondro anao amin'ny lala-mahitsy
Raha tsy fantatrao izay hatao amin'ny fiainanao dia vakio ity
Famantarana 40 no ataonao tsara eo amin'ny fiainana na dia tsy mieritreritra izany aza ianao
Tonga ny fotoana iray izay ny risika hijanonan'ny tery ao amin'ny tsimok'aretina dia maharary kokoa noho ny loza mety hitranga. - Anaïs Nin
Toy ny hoe mila mandresy lahatra bebe kokoa ianao fa tsy maintsy iharan-doza indraindray, ity teny nalaina ity dia maneho tsara ny fomba hanoherana ny fiovanao tena hahatonga anao hanaintaina ara-panahy lehibe.
Tsy maintsy miala amin'ny tanànan'ny fampiononanao ianao ary mankany amin'ny tany foana misy anao. Ho tsara ny zavatra ho hitanao. Ny zavatra ho hitanao dia ny tenanao. - Alan Alda
Rehefa vonona ny handray ireo dingana ireo ianao amin'ny tsy fantatra dia tadidio ny mamela ny intuition-nao mitarika anao. Manana ny tombotsoanao indrindra foana izy io ary hitarika anao any amin'ireo toerana tokony halehanao.
ahoana ny fomba hitadiavana ny fiainanao amin'ny làlana tsara
Rehefa mangina fotsiny isika amin'ny feo tsy re ataon'ny fiainantsika andavanandro vao afaka mandre ny hibitsibitsika ny fahamarinana izay ambaran'ny fiainana amintsika, rehefa mandondona eo am-baravaran'ny fontsika izy. - K.T. Jong
Aza adino fa mba handrenesana ny fisainanao sy hanarahanao ny antson'ny fiainana dia tokony hanginao izao tontolo izao manodidina anao ianao. Miaina amin'ny vanim-potoana mampientanentana tsy misy fitsaharana isika ary mandentika ny feo sy ny hafatra izay tena tokony henointsika.
Raha tsy tianao ny zavatra iray dia ovao izy. Raha tsy azonao ovaina dia ovao ny fihetsikao. - Maya Angelou
Raha misy lafiny amin'ny fiainanao izay tsy tianao dia tokony ho vonona ianao hanova azy ireo tanteraka, na hanova ny fomba fahitanao azy ireo hahafahanao mianatra mandray azy ireo toa azy.
Ny olona sambatra indrindra dia tsy voatery hanana ny tsara indrindra amin'ny zava-drehetra fa manararaotra ny zava-drehetra. - Sam Cawthorn
Mamatotra tsara kokoa amin'ilay teny nindramina teo aloha, ampahatsiahivina isika fa raha tena mankafy ny fiainana dia tsy mila manankarena, malaza, tanora na salama. Raha mitady ny fifaliana amin'ny toe-javatra rehetra ianao, dia mety ho feno sy afa-po bebe kokoa amin'ny ankamaroan'ny olona hafa.
Saika adala ny olona - tezitra satria mitady zavatra efa nahatezitra azy izy satria tsy fantany hoe adala izy satria manantena, maniry ary avy eo, mahatsiaro ho sorena. Tsy maintsy ho eo ny fahasosorana satria tsy afaka ianao mahita ny tenanao amin'ny fitadiavana anao dia efa eo. Tsy maintsy mijanona ny fikatsahana, mila milatsaka ny fikarohana. - Osho
Satria ny zava-drehetra ilaintsika dia efa eo amintsika fa ny fomba fiainanao, ny harena anananao, ary ny zavatra iainanao dia tsy mandray anjara amin'ny hafalianao. Rehefa tsapanao izany dia tsy very intsony ianao.
Rehefa very ny zavatra hafa rehetra dia mbola mitoetra ihany ny ho avy. - Christian Nestell Bovee
Tadidio foana fa izay efa teo aloha sy izay tsapanao ankehitriny dia mbola tsy hisy ny ho avy. Tsy maninona izay loza efa nijalianao na hoe very ny fahatsapanao amin'izao fotoana izao, misy ny mety tsy manam-petra amin'ny manaraka.
Ny very dia ampahany ara-dalàna amin'ny fizotranao toy ny hita. - Alex Ebert
Ary noho izany dia mifarana amin'ny teny nindramina izay tena nitovy tamin'ilay natombokay izahay, fa tena zava-dehibe ny lesona, mendrika ny averimberina. Raha mahatsapa ianao fa very amin'izao fotoana izao dia aza milavo lefona ity dia ampahany lehibe amin'ny fizotran'ny olona atiny rehetra alohan'ny hahitan'izy ireo ny toeram-pilaminany.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hahitanao lalana amin'ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
brock lesnar sy ilay mpikarakara
famantarana fa te hanana serieux aminao izy
tsy hitanao intsony raha mbola velona ianao
iza no nandresy tamin'ny lalao nifanaovan'i brock lesnar sy goldberg
inona no dikan'ny hoe mahafatifaty rehefa misy bandy miteny an'io